Apple wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay WWDC 2021 | Wararka IPhone
Apple waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday WWDC 2021
Jordi Gimenez | | Noticias, WWDC 2021
Shirkadda Cupertino ayaa hadda shaacisay taariikhda rasmiga ah ee loo dabbaaldegayo WWDC-da sannadkan oo waxay noqon doontaa 7-da Juun ee soo socota gebi ahaanba khadka tooska ah. Marka, hawlgalkii ugu dambeeyay ee WWDC ayaa lagu celceliyaa kuwa horumariyayaasha iyo kuwa aan horumarintu ka soo qayb gelin ee lagu falanqayn doono shirarka intiisa kale.
Marka 7da Juun ee soo socota waxaan lahaan doonnaa dhacdo amaan ah oo lagu soo bandhigayo macruufka 15, macOS 12 iyo qaybaha kale ee Apple. Kani WWDC 2021 waxay bilaabmi doontaa maanta 7 sidaan sheegno waxayna dhamaan doontaa maalinta 11 isla bishaas.
Kuwii ugu horreeyay ee kahadlaya shabakada bulshada ee Twitter waxay ahaayeen maamulayaasha Apple, waanu iskaga tagnay agaasimaha suuq geynta shirkada Greg Joswiak:
Hey Siri, ku calaamadee jadwalkayga maalinta oo dhan maalinta Juun 7deeda WWDC. pic.twitter.com/bRGkwXhLXU
Hal sano oo dheeraad ah WWDC-kan ayaa gebi ahaanba qadka ku jiri doona oo horumariyayaashu waxay awoodi doonaan inay ka qayb galaan shirarka iyo shirarka si looga fogaado dhibaatooyinka COVID-19. Sikastaba xaalku ha ahaadee, nuxurka iyo inta kale ee Apple soo bandhigeyso sanadkan waxaan hubnaa inay isku mid noqon doonaan, iyadoo la duubayo video.
Waxaan horeyba u dooneynay inaan aragno wararka ay ku soo bandhigayaan nidaamyada hawlgalka ee ka socda Apple, in kastoo sanadkaan uu umuuqdo sanad gudihiis hubaal inay jiraan warar. Tani waa shir software ah sidaas mabda 'ahaan iyo haddii sheygu aanu isbadalin ma soo bandhigayaan qalab kasta oo ku jira.
Sannadkan wuu yara yaraan karaa marka laga hadlayo dhacdooyinka Apple, laakiin innaga waxaan markasta sugeynaa isbarasho. Aynu aragno haddii waqtigan illaa maalinta WWDC 2021 ee muhiimka ah aan hayno qodob muhiim ah ... Waan arki doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday WWDC 2021
Ma runbaa in Xiaomi sawirro la mid ah ka iPhone qaado?
Tilmaamo cusub ayaa xaqiijinaya in Apple ay ka shaqeyneyso amar cusub oo loogu talagalay Apple TV